Kedu njikọ azụ kwesịrị ekwesị maka njikọ njikọ njikọ dị ike?
Ejiri isiokwu a iji nyere gị aka ịghọta ihe ndị bụ isi nke otu n'ime ihe kachasị mkpa nke oge a search engine optimization tactic - link building.
Backlinks dị oké mkpa maka ịmepụta azụmahịa dị mma n'ịntanetị. Ndị webmasters na ndị na-ewu ụlọ na-arụ ụka mgbe niile gbasara ụzọ esi enweta njikọ nbata, otu esi eme ka ha na-ele anya, na otu esi achọta ohere ụlọ njikọ dị elu. Ihe bụ na ị chọrọ ịmepụta àgwà na ngwangwa njikọta na-ezere nyocha search engine. Ịkwesịrị ilekọta ikike na aha nke ebe nrụọrụ weebụ sitere na ebe njikọ gị na-abịa n'ihi na ọ na-agwa engines ọchụchọ banyere saịtị gị. Njikọ ndị na-abata gị na-ekpebi ọkwa nke saịtị gị, nke ahụ mere ụlọ njikọ kwesịrị ịbụ akụkụ dị oké mkpa nke mgbasa ozi na ịchọta search engines.
Taa, anyị ga-elekwasị anya na ihe azụlinks na ihe kpatara ha ji arụ ọrụ kachasị na nkwalite weebụsaịtị.
Gini bu ihe ndi backlinks?
A backlink bụ hyperlink nke si n'otu saịtị gaa na ọzọ. E nwere ụdị backlinks abụọ nke dofollow na challow. Njikwa Dofollow bụ ndị anyị chọrọ na profaịlụ njikọ anyị. Njikọ ndị a nwere uru na njikọ weebụsaịtị dị na ụdị nke a na-akpọ "ihe njikọ njikọ. "Google bots parse dofollow backlinks na elu ọkwa nke saịtị na-ezo. A ga-etinyekwa backlinks nofollow na njirimara njikọ gị igosi Google na ị jikọọ na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche ọ bụghị naanị iji nweta ihe ọṅụṅụ njikọ. Njikọ ndị a nwere mkpado oche ma ghara ịba uru ọ bụla na njikọ njikọ. Achọpụtaghị ha maka nchọta ọchụchọ na dịka iwu, ndị na-eji ọrụ nke ụwa apụghị ịgbaso ya. Ha na-eje ozi dị ka ihe eji ekwu okwu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i nwere ụzọ dị mma maka mkpọsa njikọ njikọ gị, ị ga-enwe ike ịgbanwere backlinks nofollow na ndị dofollow.
Gịnị mere backlinks ji arụ ọrụ dị ka nhazi ọkwa na Google?
Mgbe Google nyochaa njikọ ahụ na-atụghachi azụ na saịtị gị, ọ na-ejikọta ọnụahịa saịtị gị na ikike nke ebe nrụọrụ weebụ nke njikọ ahụ dị na. Google na-adọta ya dị ka votu maka ebe nrụọrụ weebụ. Ọ bụrụ na votu ahụ na-abịa site na saịtị ahụ a ma ama, ọ nwere ike imetụta nsogbu weebụ ma ọ bụrụ na votu na-abịa site na spammy, isi iyi weebụ dị ala, ọ ga-enwe mmetụta dị njọ na saịtị gị SEO.
N'ikpeazụ, usoro njikọ ụlọ njikọ nkịtị na-ele anya n'ụzọ dị otú a: "Ọ bụrụ na otu ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịchọta ihe dị n'ime ya iji bụrụ ihe bara uru iji jikọta na ya, ma isi iyi a bụ nhazi nlekọta na ikikere, mgbe ahụ, njikọ weebụsaịtị kwesịrị ịbụ ebe nrụọrụ weebụ dị mma ".
Ihe ị chọrọ ịtụle maka usoro azụ azụ gị
Iji mepụta profaịlụ backlink dị mma, ịkwesịrị ịṅa ntị na mma nke weebụsaịtị ebe ị ga-achọ ịme njikọ. Ọ bụ ya mere na nkwụsị nke ụlọ ọrụ njikọ gị dị mkpa ka ị na-eduzi nchọpụta niche zuru ezu n'ahịa ma chọpụta ebe nrụọrụ weebụ nke ga-adọrọ mmasị gị. Nhọrọ kachasị mma bụ ịkpọtụrụ weebụsaịtị na PageBank dị elu nke dị mkpa maka ụlọ ọrụ gị.
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nweta backlinks bụ akwụkwọ ezigara. Ị nwere ike nweta backlinks ngwa ngwa na saịtị gị site na ịtinye njikọ gị na post gị. O di nwute, otutu ihe omuma a na-eme gburugburu ebe a na-achikota ndi mmadu. Na 2012 Google guzobere Penguin melite nke na-ebibi ọnọdụ nke weebụsaịtị ndị ji usoro njikọ ụlọ ọrụ spammy.
Ọ bụ ya mere na oge anyị jikọtara ndị na-ewu ụlọ na-enye ndụmọdụ ka ha jiri naanị ederede ederede site na njikọta:
Nkebi ahịrịokwu nke dị ka ederede na ederedeghị na isiokwu.
Nkebi ahịrịokwu nke adabaghị aha gị.
Aha nke isiokwu ị na-ezo aka.
Kama ịchekwa backlink gị na SEO kachasị ederede arịlịka, nye ndị na-agụ akwụkwọ gị ozi ndị ọzọ iji mee ka ha ghọta ihe mere ha ji chọọ ịgbaso njikọ gị na otu ha ga - esi rite uru na ya Source .